Alarobia, Aprily 28, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Scott Hardigree
Araka ny fantatsika rehetra, ny marketing amin'ny mailaka dia miasa ka tsy hitondra anao ity vaovao ity. Aleo jerentsika izay atao hoe consultant amin'ny marketing mailaka ary inona no azon'izy ireo atao ho anao.
Ireo consultants amin'ny marketing amin'ny mailaka amin'ny ankapobeny dia manana endrika telo, an Agence Marketing amin'ny mailaka, Freelancer, na mpiasa an-trano ao amin'ny mpanome tolotra mailaka (ESP) na masoivoho nentin-drazana; izy rehetra ireo dia manana fahaiza-manao sy traikefa izay manokana amin'ny famolavolana paikady marketing amin'ny mailaka mahomby. Na izany aza, ny fahaizany sy ny tolotra serivisiny dia miovaova be.
Ka mila consultant marketing amin'ny mailaka ve ianao? Raha eny, karazana inona? Apetraho amin'ny tenanao ireto fanontaniana manaraka ireto.
Mety amiko ve ny vahaolana mailaka ataoko?
Moa ve ny ESP na ny vahaolana ao an-trano manome ireo fiasa ilaiko rehetra? Mampiasa ireo fiasa izay andoavako vola ve aho? Mora amiko ny mampiasa? Mifanaraka amin'ny sarany ve ny fandaniam-bola ataoko?
Inona no halefako amin'ny mailaka?
Efa nandefa an-tsarintany izay tokony halefako ve aho? Toy ny mailaka Tongasoa, Gazety, baiko nafoina, fampiroboroboana ary mailaka fanentanana indray? Inona no tsy hitako? Aiza ny fahatapahan'ny rojom-pifandraisana mailaka?
Rahoviana aho no tokony handefa mailaka?
Tokony hampiasa fampahalalana mifototra amin'ny fihetsiky ny mpandray ahy handefasana mailaka ve aho, toy ny fisintomana taratasy fotsy na fandaozana sarety? Ahoana ny amin'ny mailaka atosika amin'ny daty, toy ny mpividy na fitsingerenan'ny andro fialan-tsasatra. Inona ny kalandrie fanontana ho an'ny taratasiko? Mitandrina ny mailaka fampiroboroboana ad-hoc ve aho?
Inona avy ireo lalàna mifehy ny orinasako?
Nanapa-kevitra ve aho hoe inona no mahatonga ny fandefasana hafatra? Inona no angona ilaina hanohanana ny hafatra? Tokony ho manual sa mandeha ho azy ny fizotry ny fanafarana data? Inona ny atiny alefa rehefa feno ireo fepetra ireo? Inona ny drafitro ho an'ny avy amin'ny anarana sy ny lohahevitra? Tokony afangaroiko ve izy io? Inona ary rahoviana aho no tokony hizaha toetra?
Inona no tanjoko?
Efa nametraka tanjona ve aho, toy ny isan'ny fisintomana, ny varotra, ny fisoratana anarana? Inona no kasaiko hatao mba hampitomboana ny lisiko? Inona no azoko atao mba hampihenana ny fisintomana?
Inona no ilaiko amin'ny fanaovana tatitra?
Mila mahita mihoatra noho ny tsindry fotsiny ve aho ary manokatra mba hanatsarana ny valiko ary hanaporofoana ny momba ahy? Ilaiko ve ny mikitika ny angona ivelany toy ny CRM sy tranokala Analytics fitaovana hametrahana sy hanarahana ny mari-pahaizana momba ny fahombiazako?
Ny marketing amin'ny mailaka dia ezaka sarobidy ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra, fa ny fizotrany dia mety ho fanamby sy handany fotoana. Ny consultant mailaka marketing na masoivoho dia afaka manampy anao hahatratra ny tanjonao raha mamela anao hampiasa ny fotoananao hampiasa lafin-javatra hafa amin'ny orinasanao.
Mila mihoatra ny fahitana fotsiny? Ny masoivoho iray mifantoka amin'ny mailaka dia afaka manome miaraka amin'ireo serivisy manohana, ary koa ny torolàlana izay takiana mba handefasana sy hanohanana programa mailaka mailaka matanjaka; vakio ny fomba fanofana masoivohom-barotra amin'ny mailaka hahafantatra bebe kokoa.
Tags: consultant mailakamailaka MarketingMpanolo-tsaina amin'ny marketing amin'ny mailaka
Nahazo fanatsarana lehibe ny Google Webmaster Central